သဒ္ဓါလှိုင်း: February 2010
ခုတလော အလွမ်းတွေ ချည်းပဲ ရေးနေတယ် ဆိုပြီး ပြောနေကြတော့ ကျမလည်း တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ပြန်ကြည့်တော့လည်း အလွမ်းတွေ အဆွေးတွေ ချည်းဖြစ်နေတာကိုး…။ စာတွေ ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်တွေ ဗူးသီးလုံးလောက် ကျနေပြီလားလို့လဲ စိတ်ပူသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း တခြားရေးဖို့ စဉ်းစားတော့ ဒီအလွမ်း ဆိုတာကြီး ကပဲ ပေါ်ပေါ် လာပြန်တယ်။ ဘုန်းဘုန်း တွေကလည်း အလွမ်းတွေကို လျှော့ပါအုံးတဲ့ ပြောပြန်တော့ တော်တော် ဆိုးနေပါလားလို့ တွေးမိသေး။ တချို့ ညီမတွေ ကလည်း သိပ်မလွမ်းပါနဲ့တဲ့ မခံစားနိုင်လို့ပါတဲ့။
ဆိုတော့… ကိုယ်လည်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ ရှေ့မှာ ငိုင်နေလိုက်တာ ဘယ်လောက် ကြာသွားမှန်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိ မထားလိုက်မိဘူး။ ဘေးနားက ညီမတယောက်က ဘာတွေ စဉ်းစား နေတာလဲ ဆိုတော့မှ သတိပြန်ဝင်လာတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လူတော်တော်များများဟာ လက်ရှိမှာ အလွမ်းတွေ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မကင်းနိုင် ပေဘူးကိုး..။
လွမ်းစရာ တွေကလည်း အများသား…။
တခါတလေ မူလတန်းထဲက အထက်တန်းထိ တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းကြီးကို လည်း အရမ်း လွမ်းမိတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၁နှစ် တက်ခဲ့ရတာ ဆိုတော့ လွမ်းတာ မဆန်းပါဘူးနော်…။ အခုထိလည်း ကျောင်းကြီးက အိပ်မက်ထဲမှာ လွှမ်းမိုးနေဆဲပဲ…။ ကျောင်းထဲမှာ အဆောင်တွေကများ၊ ကျယ်ကလည်း ကျယ်တော့ အရမ်း ပျော်စရာ ကောင်းတယ်။ ဘယ်တော့မှ မေ့လို့မရတဲ့…၊ ရင်ထဲမှာ အခုထိ ခိုဝင်နေတဲ့… အလွမ်း ရပ်ဝန်း နေရာလေး တခုပေါ့။
ကိုယ့်ကို ပညာတွေ စပြီး ပျိုးပေးခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ် တခု…။ ကိုယ့်ကို ရေလောင်း၊ ပေါင်းသင် ပေးခဲ့ကြတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးတခု…။ ဥယျာဉ်ကြီးထဲက ဆရာမ (ဥယျာဉ်မှုး) တွေ ကိုလည်း သတိရနေမိတယ်…။ အော်… ခုချိန် ဆရာမတွေ ကတော့ နောက်ထပ် ပွင့်မဲ့ ပန်းလေးတွေကို ပြုစု ပျိုးထောင် ပေးနေအုံးမှာပဲလို့ မြင်ယောင်နေမိတယ်…။ အခုထိလည်း ပန်းပင်လေးတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ လှပနေမဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးကို အဝေးကနေ မှန်းလို့ လွမ်းနေရတဲ့ အလွမ်း ရပ်ဝန်းလေး တခုပါပဲ…။
ဥယျာဉ်ကြီး ထဲက ကိုယ်နဲ့ အတူ အပြိုင် ပွင့်ခဲ့ကြတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သတိရ လွမ်းဆွတ်မိတယ်။ တချို့ကိုတော့ လူကိုသာ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်နေပေမဲ့ နာမည်က ခပ်မေ့မေ့… ပေါ်လာတဲ့ မျက်နှာလေးကပဲ သတိရမိနေတဲ့ အလွမ်း ရပ်ဝန်းလေး တခုပါပဲလေ…။
တချို့ကလည်း နှုတ်မဆက်နိုင်ပဲ ခွဲခွာခဲ့ကြပြီ။ တချို့ကလည်း နှုတ်ဆက် ခွဲခွာခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းကြီးနဲ့ အတူ ခွဲခွာခဲ့ကြတဲ့ သူတွေအားလုံး ဒီအလွမ်း ရပ်ဝန်းလေးထဲမှာ ရှိနေကြတယ်....။
ခွဲခွာခဲ့ကြရတဲ့ သူတွေအားလုံး အလွမ်းရပ်ဝန်းလေး ထဲမှာ အမြဲ ရှိနေမှာ…။
ဘယ်တော့မှ ပြန်ဆုံနိုင်ကြပါ့ မလဲလို့ တွေးကြည့်တာနဲ့တင် တင်းကျပ်တဲ့ ခံစားချက် တခုက အမိအရ ဆွဲကိုင် လှုပ်လိုက်တယ်။
သိပ်ကို သပ်ရပ် သေချာ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အလွမ်း ရပ်ဝန်းလေး တခုကတော့ ခိုင်မာ တည်တံ့စွာနဲ့ တည်ရှိနေမှာ .....။
သေချာတာ ကတော့ အလွမ်းတွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေ၊ သတိရစိတ်တွေ နဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်း ရစ်နှောင် နေလေတော့ ကိုယ့်ရင်ဘတ် ထဲက ထွက်ကျလာမဲ့ စကားလုံး တွေကလည်း အလွမ်းတွေပဲ ဖြစ်နေမှာပါ…။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:01 PM 8 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:46 PM7comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:57 AM9comments:
ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ တိမ်တွေ က အလိပ်လိုက် ရွေ့လျားလို့ ဟိုဒီ ပြေးနေကြတယ်။ ကိုယ်နဲ့ နီးလာသလို… ဝေးကွာသွား သလို….. လူသတ္တ၀ါတွေ အားလုံးဟာလည်း ဒီကောင်းကင်ကြီးရဲ့ အောက်ထဲမှာပဲ ရှင်သန် ရပ်တည် နေကြတာပဲလေ….
ဒါဆို တမိုးအောက်ထဲပဲ လို့လည်း ပြောလို့ ရတာပေါ့။ ကိုယ်လည်း ဒီကောင်းကင်ကြီး တမိုးအောက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လူသားတွေထဲက လူသား တယောက်ပါပဲ။
ဒီတမိုးထဲ အောက်မှာပဲ လူသားတွေလည်း ၀ါဒတွေ မတူ၊ ဌါနတွေ မတူ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ မတူ၊ သဘောထားတွေ မတူ၊ အမြင်တွေ မတူ နဲ့ အမျိုးမျိုး မတူတာတွေ ကြားထဲမှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်း လာကြပြီး သက်ဝင် လှုပ်ရှား နေကြရတာပဲ…။
တချို့ လည်း တူရာ တူရာ တွဲကြ၊ တချို့ လည်း မတူတာတွေ ကြားထဲမှာ တူချင်ယောင်ဆောင် နေကြ၊ တချို့  ကလည်း မတူတာကို တူအောင် ညှိကြ နဲ့ပေါ့….။
လူတိုင်း လူတိုင်း လည်း မတူတာတွေ ကြားထဲမှာပဲ တတ်နိုင်သရွေ့  အစွမ်းကုန် တူအောင် ညှိယူဖို့ လုပ်ကြရတာပါ. တဘက်စွန်း မရောက်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိဘက်က တဘက်သတ် အတွေးနဲ့ တူအောင် လုပ်ယူဖို့လည်း မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ စိတ်ကသာ အဓိက ကျမှာပါ။ စိတ်ကသာ တူအောင် လုပ်ယူနိုင်မယ် ဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ညှိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိတယ်။
တချို့  ကျတော့လည်း ကိုယ်က ဒါဖြစ်လို့ သူလည်း ဒါဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်း ရှိတတ်ကြတယ်။ ဒါကတော့ မိမိရဲ့ အတ္တ ကို အခြေခံပြီး ဖြစ်သွားတတ်ကြတဲ့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု တခုပါပဲ။ မိမိရဲ့ အတ္တကို ရှေ့ တန်း မတင်မိဖို့ လိုပါတယ်။ မိမိရဲ့ အတ္တသာ ကြီးစိုး နေမယ် ဆိုရင် မတူတာတွေ……. မတူတာတွေကို……. တူအောင် ညှိယူဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး။
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…….. တူအောင် ညှိယူဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ ပါဘူး…….. ဆိုတဲ့ စိတ်အင်အား လျော့ စေတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ မတွေးပဲ…
ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြမှု ရှိရင် မလုပ်နိုင်တာ… တူအောင် ညှိယူလို့ မရနိုင်ဘူး ဆိုတာတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယုံကြည်ချက် အပြည့်အ၀ထားရင် စိတ်ချမ်းသာ စရာကောင်းတဲ့ ဘ၀ တခုကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြမှာပါ…။
လူသားတွေလည်း တတ်နိုင် သမျှ တူအောင် ညှိယူနိုင်ကြ ပါစေလို့…..။
ကျမ လည်း မတူတာတွေထဲမှာ တူအောင် ရှာဖွေရင်းနဲ့ ရှင်သန် နေထိုင် ရအုံးမှာ……!!!!!
ကျမရဲ့  စိတ်တွေလည်း ကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်တွေနဲ့ အတူ လွင့်မျောရင်း……..
ဟိုး… အဝေး နေရာဆီ …………………….!!!!!!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:09 PM7comments:
စာအုပ်လေးထဲက ဖုန်းနံပတ်ကို နှိပ်ရင်း ရင်ခုန်စွာ နဲ့ အသံကို နားစွင့် နေမိတယ်….
တဘက်က `ဟဲလို´ တဲ့….။ ဒါ သူ့ အသံပဲ……. ရင်ထဲမှာ တဒိတ်ဒိတ် နဲ့ ဘာပြောရမှန်း မသိအောင် ဆွံ့အ သွားခဲ့တာ တလောကလုံး ဗြောင်းဆန် သွားခဲ့တာပေါ့……….။ နှလုံးသွေး တွေ ဆူပွက် လို့ ……….
ခနကြာတော့ `ဟဲလို…..ဟဲလို….´ `ဘယ်သူ ပါလဲတဲ့´…….. ။ စိတ်ကို ပြန်စုစီး လိုက်ပေမဲ့ ရင်ခုန် နေတာကတော့ လျော့မသွား ပါလား…။
ခန နေတော့မှ ဒီဘက်ကနေ `ဟဲလို… `ကို………. လား´ အခုပြောနေတာ `ထား´ ပါလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော့ အသိတွေ ထဲမှာ `ထား´ ဆိုတဲ့ နာမည် မရှိ ပါဘူးတဲ့။
ဟုတ်မှာပါ…….. ထားက စပြီး မိတ်ဆက် တာပါလို့ ဆိုတော့ ဘယ်က လဲတဲ့။ ကျွန်တော့ အိမ်နားကလားတဲ့။ ဘာပြောရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ `ထား´ ကို နားလည် ပေးမယ်လို့ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ် တွေးတဲ့ အတွေးလေး တခုကို တွေးနေ မိသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ `ထား´ တို့ နှစ်ယောက် ဟာ ဖုန်းလေးထဲ ကနေ ခင်မင်မှု အစ ပျိုးခဲ့ကြ တယ်နော်…။ နေ့တိုင်း နီးပါး ဖုန်းဆက် ဖြစ်တဲ့ `ထား´ တို့ နှစ်ယောက် လည်း တစစနဲ့ ခင်မင် လာခဲ့ကြပြီး သူ့ အကြောင်း ကိုယ့် အကြောင်း လေးတွေပါ ပြော ဖြစ်နေခဲ့ ကြပြီနော်…။ တကယ်တော့ သူ့အကြောင်း တော်တော် များများ ကိုသိထားပြီး `ထား´ အကြောင်းကို မသိခဲ့တဲ့ သူ့ကိုတော့ ရင်ထဲကနေ တောင်းပန် နေမိတယ်…။
တကယ်တော့ `ထား´ ကို သိသွားမှာ ကို စိုးရိမ် ခဲ့တဲ့ သူတယောက်ပါ `ကို´……..။
`ကို့´ ကို စတွေ့တွေ့ချင်း သတိထား မိပြီး ရင်ခုန် ခဲ့ရတဲ့ အတွက်… ပြီတော့ နေ့တိုင်း နီးပါး တွေ့ဖြစ် နေခဲ့တဲ့ အတွက် ပဲပေါ့…။ `ကို´ ကတော့ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတဲ့ သူတယောက် ဖြစ်နေမှာ မို့လို့လေ။ ဘယ်လိုမှ မထင်ရ လောက်အောင် `ထား´ က `ကို့´ ကို တွေ့ရင် မသိချင် ယောင်ဆောင်ပြီး ဘာမှ မဟုတ်တဲ့သူ၊ သူ့ကိုလည်း ဘာ ခံစားချက်မှ မရှိသယောင် ဖြစ်နေတဲ့ သူ မို့လို့လေ။ ဒါပေမဲ့လည်း ရင်ထဲမှာတော့ `ကို´ မသိတဲ့ ခံစားမှု မျိုးနဲ့ ဘယ်လောက်တောင် နက်နက် ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်နေပြီလဲ ဆိုတာ `ထား´ ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူးလေ…!!!!!
ဘယ် ဘ၀ က ၀ဋ်ကြွေးကြောင့် ဒီလို အခြေအနေ ဖြစ်ရတာပါလိမ့်….။
`ထား´ ရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း `ကို့´ ကို သိစေချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း `ထား´ မပြောရဲဘူး `ကို´….။ နေ့တိုင်းတွေ့နေရတဲ့ အနေအထား လေးကိုပဲ တန်ဖိုးထားပြီး ပျော်ရွှင် နေမိတယ်လေ။ `ထား´ သိပ်ကို ဟန်ဆောင် ကောင်းခဲ့ ပါတယ်နော်။ `ထား´ ကို ဘယ်သူဆိုတာ သိပ်သိချင် နေခဲ့တဲ့ `ကို့´ ကိုလည်း `ထား´ ပါလို့ ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ထုတ်ဖေါ် ပြောပြချင် တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ `ထား´ ကိုသိရင် စိမ်းကားသွားမှာ… မုန်းသွားမှာ… ကို မလိုအပ်ပဲ စိုးရိမ်နေ မိတယ်.။
ဖုန်းလေးထဲ ကနေ `ကို´က `ကို´ဖတ်တဲ့ ၀တ္ထုလေးကို တညလုံး ပြောပြခဲ့တာ မိုးစင်စင် လင်းမှ ပြီးတော့တယ်လေ။ `ကို´ က `ထား´ ကို အပြင်မှာ သိပ်ကို တွေ့ချင်တဲ့ အကြောင်း ပြောတော့ `ထား´ ရင်မော လိုက်ရတာလေ..။ တနေ့ တွေ့ကြ မှာပေါ့လို့ ပြောခဲ့တဲ့ `ထား´ ကို ဘယ် တနေ့လဲ… ကမ္ဘာလဆန်း တရက်နေ့လား… လို့ ပြောခဲ့တဲ့ `ကို့´ စကားကို နားထောင်ပြီး `ထား´ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်။
`ထား´ `ကို့´ ကို တွေ့နိုင် ဖို့ သတ္တိတွေ မွေးမြူ ရအုံးမယ်လေ…။
တကယ်တော့ `ထား´ က `ကို့´ ကို နေ့တိုင်း တွေ့နေရတယ်။ `ကို့´ ဘက်ကလည်း တွေ့ချင် နေမှာပဲ ဆိုပြီး `ထား´ လည်း ထပ်တူ ခံစား ခဲ့ရပါတယ်။
ဖုန်းလေးထဲကနေ `ကို့´ အသံ ကို ကြားနေရရင် ကိုပဲ စိတ်ချမ်းသာ နေရပြီလေ !!!
`ကို´ ကလည်း တနေ့ ထက် တနေ့ အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ တောင်းဆို လာတဲ့ အခါ `ထား´ ဘက် က အမြဲ နှုတ်ဆွံ့အ သွားခဲ့ ရတာပဲနော်…။ `ကို့´ ဘက်က တခါတရံ စိတ်မရှည်တဲ့ လေသံ ဖြစ်သွားတာ `ထား´ သိလိုက်ပေမဲ့ မသိ ဟန်ဆောင် လုပ်လိုက်ရတယ်`ကို´….!!!!!။
တခါတလေ တော့လည်း `ကို´ က `ထား´ တွေ့ချင်တဲ့ အချိန်ကျမှပဲ တွေ့ကြရအောင် ပါတဲ့။ အဲလို ပြောပြန်တော့လည်း `ထား´ က ကျေးဇူး တင်ရပါတယ်။ တခါတခါ တော့လည်း `ထား´ ဘက်က မှားနေပြီလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်. ။
လူတယောက် ကို စိတ်ဆင်းရဲ စရာတွေ များလုပ်နေ မိပြီလား လို့ပါ..။
ဒါပေမဲ့ `ထား´ ဘက်ကလည်း မပျက်မကွက် ဖုန်းဆက်ဆဲ၊ မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်ပေးဆဲ၊ ချစ်သူများနေ့မှာ လက်ဆောင်ပေးဆဲ ပါပဲ…။
`ကို့´ ဘက်က `ထား´ ကို မှတ်မှတ်ရရ လက်ဆောင် ပေးဖူး တယ်နော်။ `ကို´ တို့ သူငယ်ချင်း တစု ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား ဖူး သွားမယ် ဆိုပြီး `ထား´ ကို ပြောလာပါတယ်။ `ထား´ အတွက် လက်ဆောင် ဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲတဲ့….။ `ထား´ ရင်ထဲမှာ ပြောမပြ တတ်လောက်အောင် ၀မ်းသာသွားတာ…!!!!!! `ထား` ကလည်း `ကို…´ ကြိုက်တာ ၀ယ်လာခဲ့ပါလို့ ပြန်ပြော လိုက်တာပေါ့.။
ဟုတ်တယ်…`ထား´ ကစပြီး ဘာလက်ဆောင် ပေးပါ ဆိုတာထက် `ကို´ စိတ်ကူးနဲ့ ၀ယ်လာပြီး ပေးမဲ့ လက်ဆောင်ကို `ထား´ ပို မြတ်နိုး လို့ပါ `ကို´ ….။
`ကို´ ဘာများ ပေးမလဲ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်စိတ် နဲ့ `ထား´ မှာ တွေးပြီး ပျော်နေရပါပြီ။ `ကို´ ပြန်ရောက်ပြီ ဆိုတော့ `ကို´ က `ထား´ အတွက် လက်ဆောင် ပါတယ်တဲ့….။ စာတိုက် ကနေပဲ `ထား´ ကို ပို့ပေးပါလို့ ဆိုတော့ ပို့လိုက် ပါမယ်တဲ့….။ နောက်တနေ့ မှာတော့ `ထား´ ဆီကို ပါဆယ် ထုပ် ရောက်လာ ပါတယ်.။ `ထား´ လည်း မ၀ံ့မရဲ နဲ့ ပါဆယ်ထုပ် ကို ကြည့်ပြီး မှင်သက် သွားမိတယ်..
`ကို´ တကယ် လက်ဆောင် ၀ယ်လာတာ ပါလား ဆိုပြီး… ပြီးတော့ ၀မ်းနည်းမှု က ထိန်းမရ တော့ပဲ မျက်ရည်မိုး တွေ ဖြိုင်ဖြိုင် ကျလာတယ်..။ မိုးကောင်းကင်ကြီး တခုလုံး မှောင်မည်းနေ သလိုပါပဲ…`ထား´ ရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း အရာ အားလုံး မှောင်အတိ ကျလို့….
ရင်ခုန်စွာ နဲ့…. သိချင်နေတဲ့ ပါဆယ်ထုပ် ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖွင့်လိုက်တော့ ပန်းလေးတွေ ထိုးထားပြီး သိပ်လှပတဲ့ ရိုးရာ ချည် အင်္ကျီလေး တထည် ဖြစ်နေပါတယ်..။ အရောင်လေး ကလည်း `ထား´ သိပ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်လေး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ပိုလို့ အံ့အား သင့်မိတယ်လေ။ ညဘက် မှာတော့ `ကို့´ ဆီကို လက်ဆောင်ထုပ် ရောက်တဲ့ အကြောင်း ဖုန်းဆက်တော့ ကျွန်တော် ၀ယ်လာတဲ့ လက်ဆောင်ကို ကြိုက်ရဲ့လားတဲ့……..။ `ထား´ ၀မ်းသာလွန်းလို့… ဘာပြော ရမှန်း မသိတော့အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ တယ်နော်…. !!
ဒီလိုပါပဲ `ကို´ နဲ့ ပက်သက်ရင် အလိုလို ကျလာတတ်တဲ့ ပုလဲလုံးတွေ ကိုသာ သီကုံး ထားမယ် ဆိုရင် ကမာကောင်လေး တွေတောင် သဘောကျမယ် ထင်ပါရဲ့ ….!!!
တနေ့မှာတော့…. `ကို´ က အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ အတင်း တောင်းဆိုတော့ `ထား´ အားလည်းနာ၊ စိတ်လည်း မကောင်းတာနဲ့ တွေ့ဖို့ ချိန်းလိုက် ပါတယ်…။ တွေ့မဲ့ နေရာ ကတော့ တခြား မဟုတ်ပါဘူး… အီကို ကျောင်းတော်ကြီး မှာပေါ့……..။
နေရာ ဒေသ သေချာ ပြောပြပြီး ချိန်းကြတာပေါ့..။ အမှန်တကယ် `ထား´ လည်း မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာ တခု ပါပဲလေ…။ တခုသော နေ့ရဲ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ မှာ `ထား´ တို့ ချိန်းခဲ့ ကြတာပေါ့။ `ထား´ ကို တွေ့ဖို့ ကားတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ထွက်သွား ကြတဲ့ `ကို´ တို့ သူငယ်ချင်း တွေကို ကြည့်ပြီး သက်ပြင်း ရှည်ကြီး တခု ကိုသာ ချနေမိ တော့တယ်။
ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ နေရောင်ခြည် အောက်မှာ နှလုံးသွေးတွေ ပွက်ပွက်ဆူလို့ နှုတ်ခမ်း ပေါက်ထွက်မတတ် အံကို တင်းတင်း ကြိတ်ထားတဲ့ `ထား´ ကို နားလည်ပေးနိုင် ပါစေ လို့သာ ဆုတောင်း မိနေ တော့တယ်။ တကယ်တော့ `ထား´… ချိန်းတဲ့ နေရာ ကို သွားဖို့ သတ္တိ မရှိခဲ့ ပါဘူး `ကို…´………။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် `ကို..´ တယောက် စိတ်ဆိုးသွား မှာပဲ ဆိုတဲ့ အသိက ရင်ဝကို ဆောင့်လို့ စည်းချက် မမှန်တဲ့ ရင်ခုန်နှုန်း တွေကသာ စိုးမိုး နေတော့တယ်…။
>ညနေ ဖုန်းဆက်တော့ `ထား´ ကို မတွေ့ဘူးတဲ့။ `ထား´ မလာခဲ့တာ လားတဲ့..။
`ထား´ မညာခဲ့ ပါဘူး `ကို´ ….။
အဲလို ဆိုတော့လည်း နောက်မှ တွေ့ကြတာ ပေါ့တဲ့။ `ထား´ တွေ့ချင်တဲ့ အချိန် ကျမှပဲ တွေ့ကြတာပေါ့တဲ့…။
တဒင်္ဂ နှုတ်ဆွံ့ လို့…..!
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်`ကို.´။ `ထား´ ကို အပြည့်အ၀ နားလည်ပေး တဲ့အတွက်ပေါ့…။
မထင်မှတ်တဲ့ အခြေအနေ တခုကြောင့် `ထား´ ကို `ကို.´ သိသွားခဲ့တဲ့ နေ့ကိုတော့ တသက် မေ့လို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး `ကို´…။
အဲဒီနေ့က `ထား´ သိပ်ချစ်ရတဲ့ အဖွား ဆုံးတဲ့ နေ့တနေ့မှာပေါ့။ `ထား´ ပြောပြ တော့ `ကို…´ သိသွားတယ်လေ။ `ထား´ သူငယ်ချင်းတွေက `ကို´ `ကို့.´ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရောက်လာခဲ့ ကြတယ် လို့ ပြောတော့ … `ထား´ အံ့သြ ၀မ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။
နောက်နေ့တွေ မှာလည်း ဖုန်းထဲကနေ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့၊ ကျောင်းစာတွေ စိတ်မပူဖို့၊ ပြောတာတွေ စုံနေတာပဲ.။ `ထား´ ၀မ်းလည်းသာပါတယ်။ ဂရုတစိုက် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့`ထား´ အားတုံ့ အားနာ ဖြစ်ရပါတယ်`ကို.´…..။
`ထား´ ကို စိတ်မဆိုး ပါစေနဲ့ လို့သာ အထပ်ထပ် ဆုတောင်း နေမိတော့တယ်။
`ထား´ ဘက်ကလည်း အရင် အတိုင်း မသိသလို ဆက်ဆံ ခဲ့တဲ့အတွက် `ကို´ တယောက် ဘယ်လောက်တောင် ထိခိုက်သွားလဲ ဆိုတာ……..
`ထား´ မသိစေချင်လို့ `ကို့´ ဘက်ကလည်း မသိသလို ဆက်ဆံပေးခဲ့ တဲ့အတွက်….
အမြဲတမ်း နီးပါး နားလည်မှု တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ `ကို့´ ရဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံမှု တွေအတွက်……
နောင်ဘ၀ ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင်ပေါ့…..
ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့၊ နားလည်မှု တွေနဲ့ ဆက်ဆံတတ်တဲ့၊ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားပြီး သိပ်ကို ချစ်ခဲ့ရတဲ့ `ကို…´ နဲ့ ဆုံစည်းခွင့်လေး ရရပါလို၏ လို့သာ ဆုတောင်း လိုက်ပါရစေတော့ ………!!!!!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:19 PM 10 comments:
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဒီကနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၃) ရက်နေ့ဟာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ကလေးများနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အထိမ်းအမှတ် ပွဲတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းမှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကျင်းပလေ့ ရှိခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မွေးနေ့ ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားတွေ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် လာခဲ့ ရပါတယ်။
ဒီတော့ နောင်လာ နောက်သားတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင် တယောက်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို သိဖို့ ဘယ်လောက် အရေးကြီးပါသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမိုင်း ကထိက လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး အခုတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အီလီနွိုင်းပြည်နယ် ဂျတ်ဒ်ဆင် (Judson) တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်း ပါမောက္ခလုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာ နော်အိန်ဂျလင်းက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း ကိုတော့ တိုင်းပြည်က သိသင့်တယ်၊ ကလေးတွေလည်း သိသင့်တယ်၊ ပညာတတ် တွေလည်း သိသင့်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်း အမွေအနှစ်က ကိုယ်က ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ သိမှသာ၊ ပြောနိုင်မှ သာလျှင် အခြား ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေကလည်း ကိုယ့်လူမျိုးကို ရိုသေမယ်၊ အသိအမှတ်ပြုမှာပေါ့။ ကိုယ်ကမ အသိအမှတ် မပြုရင် အခြား လူတွေကလည်း ကိုယ့်ကို ဘယ်လို အသိအမှတ်ပြုမလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တောင်မှ မသိခဲ့လို့ရှိရင် ဒီတိုင်းပြည်က ဘယ်သူ ထောင်ခဲ့မှန်းတောင် သူတို့ သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းအစကိုလည်း သူတို့ မသိဘူးဖြစ်မယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ထူထောင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တကယ်တော့ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ပါခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကလေးတွေက ဒါကို သိခဲ့လို့ရှိရင် နိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် အလားအလာ ပိုကောင်းနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒီတိုင်းပြည်ကို လည်း ပိုချစ်ပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ တိုးတက်အောင် လုပ်ချင်စိတ်တွေ ရှိလာမယ်ပေါ့။ သူတို့ကို နောက်ကနေ တွန်းအားပေးတဲ့ သဘော ဖြစ်နိုင်မယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းကို မသိရင်တော့ သူတို့အတွက်က ကြည့်စရာ နမူနာ စံပြလူ မရှိဘူး။ ကျန်တဲ့လူတွေကို လျှောက်ကြည့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးထက် အခြား ကောင်းတဲ့လူမျိုးရဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေကိုပဲ အားကိုး အထင်ကြီးပြီး အဲဒီလူမျိုး တွေကို ပိုအထင်ကြီးသွားမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်ကလည်း လျော့သွားနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာ လူတော်လူကောင်း “ပညာတတ် အဆင့်တွေမှာပါ လုံးဝ မသိရဘူး ဆိုကတည်းက ဒီတိုင်းပြည်ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လူရဲ့ သမိုင်းက လုံးဝ ပျောက်သွားပြီပေါ့။ တိုင်းပြည် တည်ထောင်တဲ့ လူရဲ့ သမိုင်းပျောက်ရင် တိုင်းပြည်ပျောက်တာနဲ့ အတူတူပဲလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်ဖျောက်ပစ်တဲ့ဟာက ကိုယ့်ရဲ့ဇာစ်မြစ်က ပျောက်သွားတာပေါ့။ အမွေအနှစ် ပျောက်သွားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လက်ထက်မှာ ဆိုရင် သူက တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
“အဲလို တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး အတူတူပေးဖို့ စည်းရုံး နိုင်ခဲ့လို့ လူတွေကလည်း သူ့ကို ယုံကြည်ခဲ့တယ်၊ အားကိုးခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည် အားကိုးခဲ့တဲ့ လူကြီးမျိုးကို တိုင်းပြည်မှာရှိဖို့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျိုးနဲ့ အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့တည်ထောင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်တယ်။
“အဲဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းကို မသိဘဲနဲ့ သမိုင်းကိုလည်း မသိတော့ဘူး။ ဗမာပြည်ဟာ ဘယ်လောက် အထိ ကမ္ဘာမှာ တန်းတူရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ လည်း မသိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီလို အခြေအနေမျိုး ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ချင်စိတ်လည်း ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ခေတ်ကမ္ဘာ တိုးတက် နေပေမယ့် မြန်မာပြည် ကတော့ ဆက်ပြီး တိုးတက်စရာလမ်း မရှိတော့ ဘူးပေါ့။”
Aung San and the struggle for Burmese Independence ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်း ရေးသားခဲ့တဲ့ သူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်....။
ကိုယ့်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့တယ် ဆိုတာ နောင်လာ နောက်သားတွေ မသိရလေအောင်၊ မှေးမှိန်အောင် အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်နေကြတဲ့ လူတွေကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံကြီး ဘယ်လောက်တောင် ဆုတ်ယုတ် နေရပါပြီလဲ...။
ကိုယ်လည်း အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘေးနား ၀န်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ကလေးတွေ၊ လူငယ် လူရွယ်တွေ ကို လက်လှမ်း မီသလောက် ပြောပြ ရင်း ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဒီလို ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ ဂုဏ်ယူ ပြောဆို နိုင်ကြပါစေလို့ ..........။
ဗိုလ်ချုပ် ၏ ၉၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြုပါသည်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 9:50 AM6comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:06 PM5comments:
ထပ်တူ ဆိုတော့ တထပ်တည်း ကျတဲ့ အခြင်းအရာ တခုလို့ ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်နော်…။
ဘယ်အရာ မဆို ထပ်တူ ကျဖို့ ကတော့ အရမ်းကို ခက်ခဲလွန်းတဲ့ ကိစ္စ တရပ်လို့လည်း ပြောနိုင် ပါတယ်…။
တယောက်နဲ့ တယောက်လည်း ထပ်တူကျဖို့ မဖြစ်နိုင် ပါဘူးလေ..။ သိပ်တူလွန်း ပါတယ် ဆိုတဲ့ အမွှာ တွေတောင် တထပ်တည်းမှ မကျနိုင်တာ.။
ဒါပေမဲ့ စိတ်ချင်းတော့ တထပ်တည်း ကျနိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိတော့ ရှိနိုင် ပါတယ်။ စိတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ခံစားမှု မှာတော့ တထပ်တည်း ကျချင် ကျနိုင်ပါတယ်…။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ထပ်တူ ခံစားမှုမျိုးကို ခံစား တတ်လို့ပါ..။ ခပ်ငယ်ငယ် ထဲက ထပ်တူ ခံစားတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိခဲ့တယ်..။ တခြားသူ ငိုရင် ငိုချင်တယ်. တခြားသူ ခံစားရရင် ခံစားရတယ်…။ တခြားသူက တခုခု ဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်ရင်လည်း ကိုယ်ဖြစ်နေသလို ခံစား ရပြန်တယ်။
ဘယ်သူက ဖြင့်တော့ ဘယ်လို……. ဖြစ်သွားတာ….! သူငယ်ချင်း တယောက် ကတော့…. ဒီလို… ဖြစ်သွားပြီ…..! သူကတော့….. အခု…. ဘယ်လို….! ကြားနေရုံ နဲ့ကို စိတ်က မကောင်းတော့ဘူး.။
ဘယ်သူကတော့……. ဘယ်လို အခက်အခဲ ရှိနေပြီ …. ဆိုရင် ကိုယ်က လုပ်ပေး ချင်နေပြီ။ (အဲဒါ ကောင်းတာလား မကောင်းတာလား တခါတလေ မဝေခွဲ တတ်တော့ဘူး….)။
သူတို့ ပြောတာ နားထောင် နေရင်လည်း ကိုယ်က ခေါင်းလေး တငြိမ့်ငြိမ့် လုပ်ပြီး နားထောင်နေတာ တော်တော် ကြာတော့ ကိုယ်လည်း ခေါင်းတွေ ကိုက်လာပြီ….။ ကိုယ်က အရှည်ကြီး တွေးနေသေးတာကိုး…..။
တခါတလေ မကြားရရင် ကောင်းမှာပဲလို့တောင် တွေးနေမိသေး…..။ ကိုယ်က ရင်မောပြီး ကျန်နေလို့လေ…။
ဒါကြောင့်လည်း ထပ်တူကျတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို ကျမအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ရတာ ခက်ခဲ ပင်ပန်း လွန်းတယ်လေ….။ ဒါပေမဲ့လည်း ထပ်တူကျ တတ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို အခုထိ ပြောင်းလဲလို့ မရသေးဘူး။
ရင်မောမောနဲ့ ရေးရင်း……. ရေးရင်းနဲ့ ရင်မော လာရပြီ……..။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:47 PM7comments:
ခေါင်းဆောင် တယောက်မှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းမျိုး ရှိရမှာလဲ…။
အထက်တန်း ကျောင်း မှာဆို အတန်း တတန်းမှာ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်က အတန်းရဲ့ ကိစ္စ တော်တော် များများကို တာဝန်ယူ ကြရပါတယ်။ တနေ့တာ အတန်းထဲမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ရ ပါတယ်။ ဆရာ.ဆရာမတွေ လုပ်ခိုင်း သမျှကိုလည်း လုပ်ပေးကြရ ပါတယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုး ရှိတဲ့သူကိုပဲ အတန်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် လုပ်ခိုင်းကြတာ များပါတယ်။ တနှစ် ပြီးသွားလို့ နောက်တနှစ် တက်တဲ့ အခါမှာလည်း မနှစ်က အတန်း ခေါင်းဆောင် ကိုပဲ ပြန်ရွေး ကြတာ များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်း ကိုသိနေလို့ပါ.။ အတန်း တတန်းရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဟာ ဦးဆောင်လုပ်တတ်ပြီး တော်တော် များများကို အနစ်နာခံ တတ်တဲ့စိတ် နဲ့ လုပ်ကြရ ပါတယ်။ စာဘက်မှာလည်း တော်နေရပါတယ်။
တက္ကသိုလ် မှာလည်း အတန်းတတန်း ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုရွေးချယ် ကြတဲ့ အခါ ဦးဆောင် လုပ်တတ်ပြီး အနစ်နာ ခံတတ်တဲ့စိတ် အများအလုပ် ကို စဉ်းစဉ်း စားစားနဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ သူကိုပဲ ရွေးချယ် ကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ကျတော့ အလုပ်တွေ ပိုများလာ ပါတယ်…။ အနုပညာ… အားကစား… ကြက်ခြေနီ… ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ… ဆရာ ကန်တော့ပွဲ… ဆရာ. ဆရာမတွေ အတန်းချိန်… အများကြီးပါပဲ…. အတန်းရဲ့ ခေါင်းဆောင် `အီးစီ´ ကပဲ လုပ်ရပါတယ်။ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲ အလုပ်တွေ များပြီး အတန်းချိန်လည်း မှန်မှန် တက်ရပြန် ပါတယ်။ `အီးစီ´ လုပ်ပြီး အတန်း မမှန်ရင်လည်း ဆရာ. ဆရာမ တွေရဲ့ ဆူပူတာကို ခံရမှာ မို့လို့ပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတန်းခေါင်းဆောင် `အီးစီ´ လုပ်တဲ့ သူတွေ ကို အလွန်ပဲ ချီးကျူးမိပါတယ်. တော်တော် များများကို လုပ်နိုင် ကြလို့ပါ။
ကျမတို့ ကျောင်းတက် တုန်းက ပရက်တီကယ် လုပ်ရတဲ့ အတန်းထဲမှာ လေးဖွဲ့ ရှိပါတယ်။ တဖွဲ့ကို ဆရာ.. ဆရာမ တယောက်စီ ရှိပါတယ်…။ ပြီးတော့မှ ပါမောက္ခ ရှိပါတယ်..။ တဖွဲ့စီ လုပ်ရတာ တွေကတော့ မတူကြပါဘူး။
ကျမ ကျောင်းတက်တဲ့ တလျှောက် လေးစား ကြည်ငြိုမိပြီး အင်မတန်မှ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသတဲ့ ဆရာမ (အဲဒီ ဆရာမက ဒေါက်တာ တယောက်ပါ) နဲ့ အတူတူ လက်တွဲ ခဲ့ဖူးတယ်။ လက်တွဲခဲ့တယ် ဆိုတာက ကျမတို့ စာတန်း ပြုစုတော့ အဲဒီ ဆရာမက ကျမတို့အဖွဲ့ မဟုတ်ပဲ နောက်တဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာမ တယောက် ပါ။ ဒါပေမဲ့ တခန်းထဲမှာ အတူတူ လုပ်ကြရတော့ ကိုယ့်ဆရာမရင်း တယောက်လို ခင်မင် မိကြပါတယ်။ စာမေးစရာ ရှိရင် လည်း သူ့ဆရာမ ကိုယ့်ဆရာမ မခွဲခြားပဲ မေးကြပါတယ်။ စစခြင်း ပရက်တီကယ် မှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း တွေကိုလည်း ဆရာမ ကိုယ်တိုင် ၀ယ်လာပြီး အားလုံးကို ပေးပါတယ်။ သမီးတို့ လိုတာတွေ ၀ယ်လာပြီ ယူလိုက်တဲ့။ ပရက်တီကယ် အခန်း ထဲက တပည့်တွေ အာလုံး ပရက်တီကယ် လုပ်ဖို့ အတွက် ၀ယ်လာတာပါ.။ ကျမတို့လည်း အားနာနာနဲ့ပဲ ယူလိုက်ကြတာပေ့ါ။ ဆရာမ အရမ်း ကျေးဇူးတင်လိုက် တာပေါ့…။
တနေ့..... ကျမတို့ အဖွဲ့ ပေါင်းခံတဲ့ အလုပ် လုပ်တဲ့ ကိစ္စ ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ……..!!!
ကျမတို့ ပရက်တီကယ် အခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့ မီးဖို အကြီးကြီး ရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ဆေးကြောပြီးရင် ခြောက်အောင် အဲဒီ မီးဖိုကြီးထဲမှာ ထည့်ထား ရပါတယ်။ ပြာဖြစ်အောင် အထိလုပ်ဖို့ ဆိုရင် အဲဒီ မီးဖိုကြီးထဲမှာ အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီ ထည့်ထား ရပါတယ်။ အရမ်း ပူလို့ အနားကို သိပ်မကပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျမတို့အဖွဲ့ ပေါင်းခံတဲ့ အလှည့် အပြီးမှာ ကျမက ပစ္စည်းတွေကို ဆေးကြောပြီး မီးဖိုကြီးထဲထည့် နေတုန်း ၀ုန်းဆိုတဲ့ အသံကြောင့် လှည့်ကြည့် လိုက်တဲ့အခါ မထင်မှတ်ထားတဲ့ မီးလုံးကြီး တလုံး တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ နောက်တဖွဲ့ ပေါင်းခံ နေတုန်း အခန်းမသင့်လို့ မီးထလောင် တာပါ။ အဲဒီ အချိန်မှာ အခန်းထဲမှာ ဆရာ…မရှိပဲ ဆရာမ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ထဲမှာ ဆိုရင် ယောက်ျားလေး တယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာမ…ရယ်… နောက်တဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာမ (ကျမ လေးစားခဲ့ရတဲ့ ဆရာမပေါ့) ရယ် ရှိနေ ကြပါတယ်။ အခု ရေးနေတုန်းကိုပဲ ဆရာမရဲ့ မျက်နှာလေးကို ပြေးပြီး မြင်ယောင် နေမိတယ်။ ပထမတော့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်နေတုန်း…… အဲဒီ ဆရာမက ပေါင်းခံထားတဲ့ ကိရိယာကို အရင်ဆုံး သွားပြီး ဆွဲဖြုတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီးက တော်တော်လေး ကူးစက် နေပါပြီ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ကျမတို့အဖွဲ့ ဆရာမက သူ့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ အကုန်ယူပြီး ဘာမှလည်း မကူညီနိုင်ပဲ အခန်းထဲက ထွက်သွားမှ ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားပါ တော့တယ်။ အခန်းထဲမှာ ကလည်း လောင်စာ ပစ္စည်းတွေက အများကြီး ဆိုတော့ ငြှိမ်းလို့မှ ရပါ့မလား ဆိုပြီး ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ပေါ့……..။
ကျမတို့ တွေက အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ အ၀တ်တွေနဲ့ ရေစွတ်ပြီး လိုက်ဖုန်းလိုက်၊ ရေနဲ့ ငြှိမ်းလိုက်၊ ပက်လိုက်.နဲ့.. မီးက ကျမတို့ စားပွဲ အရှည်ကြီး အပေါ် မျက်နှာပြင် တလျှောက် ကူးသွားလိုက်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မရတော့ ပါဘူး။ မီးက ငြိမ်းသွားလိုက်၊ ဟိုဘက် ကို ပြန်ကူးသွားလိုက်နဲ့.... ဆရာမ ကလည်း သမီးတို့ စိတ်မပူနဲ့ ဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဂရုမစိုက်ပဲ တပည့်တွေနဲ့ အတူ ရသမျှ ငြှိမ်းသတ် နေလိုက်တာ… တော်တော် ကြီးကြာမှ မီးငြိမ်း သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့မှ အားလုံးလည်း အသက်ရှုဖို့ သတိရကြပြီး ကြည့်လိုက်တော့ တခန်းလုံး ရေတွေနဲ့ စိုရွှဲ နေပါတယ်…။ မီးငြိမ်းတော့မှ ကျမတို့တွေ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖက်ပြီး ၀မ်းနည်း နေလိုက်တာများ…။ တော်တော်နဲ့ စကားလည်း မပြောနိုင် ကြပါဘူး။ မီးသာ မငြိမ်းခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပေါ့…..။ ကျမတို့အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာမ ကတော့ မီးငြိမ်းမှပဲ အတန်းထဲကို ပြန်လာ ပါတယ်… ။
ကျမတို့တတွေ ဆရာမကို စိတ်ပူ လိုက်တာလေ။ ဆရာမလက်ကတော့ မီးအရှိန်ရယ် ပေါင်းခံ အိုးကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အရှိန်ရယ်ကြောင့် လက်လောင် သွားပါတယ်။ ကျမတို့က စိတ်ပူပြီး ညဘက် ဖုန်းဆက်တော့ လည်း ဘာမှ မပူနဲ့ ဆရာမ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး တဲ့လေ..။ ကျမဖြင့် ဆရာမရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အသိ၊ ခေါင်းဆောင် တယောက်ရဲ့ အနစ်နာခံမှု၊ တပည့်တွေ အပေါ် သက်ညှာမှု၊ နားလည်မှု၊ အန္တရာယ် နဲ့ ကြုံလာခဲ့တဲ့ အခါ ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်တာ… တွေကို သိလိုက်ရတဲ့ အခါ ကြက်သီး ထသွားမိတယ်။ ပြီးတော့ မတူညီတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ သူတွေကိုလည်း တွေ့လိုက် ရတယ်။ ဆရာမနဲ့ ကျမတို့တွေလည်း ပိုလို့ ရင်းနှီး ချစ်ခင် သွားကြတယ်လေ…။ ကျမကတော့ ဆရာမစိတ်ဓါတ်ကို အားကျ လေးစားလိုက်တာ…။
ကျမတို့တွေ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ စုပေါင်းပြီး လုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် မီးကို အနိုင်ရ လိုက်တာပါ…..။
ကျမ ဆိုရင်ရော ဆရာမ လို စိတ်ဓါတ်မျိုး ထားနိုင်ပါ့မလား……!!! အတွေးထဲမှာ နစ်မြောရင်း….!!!
ဒီစာစုလေးနဲ့ ကျမ လေးစား ချစ်ခင်ခဲ့ ရတဲ့ ဆရာမ ကို သတိတရနဲ့ ကန်တော့ လိုက်ပါတယ်.။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:29 PM6comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:11 PM6comments: